Sh/Umal oo shaaciyey sababta looga joojiyey muxaadarada | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Sh/Umal oo shaaciyey sababta looga joojiyey muxaadarada
Sh/Umal oo shaaciyey sababta looga joojiyey muxaadarada
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo maalmahaan ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa Galabta oo Axad ah horay loo qorsheeyey in uu Muxaadaro ku qabto Muqdisho,hayeeshee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ay sheegtay in la joojiyey,waxaana uu faah faahin ka bixiyey sababta keentay in la joojiyo.
Sheekh Umal ayaa sheegay in isaga uu dalbaday in gebi ahaan muxaadarada la joojiyo,isaga oo kasoo horjeeda in muxaadarada darteed uu dhiig u daato.
Isaga oo hadal ka jeedinayey kulan lagu soo dhaweynayey oo Galabta lagu qabtay Muqdisho ayuu sheegay in Madaxda ugu sareysa dalka ay ka go’need qabashada muxaadarada balse isagu uu gartay in aan marnaba la qaban.
Waxaa uu sidoo kale hadalkiisa uu intaasi ku daray inay nasiib darro tahay dadka leh fadwo uu sameeyey ayaa dad lagu laayey,hayeeshee uu sheegay hadii ay taasi jirto uusan u soo gurman laheyn Shacabka Soomaaliyeed.
Markii ay soo baxday in Sheekh Maxamed Cabdi Umal uu muxaadarado ku qabanayo Muqdisho ayaa waxaa taasi kasoo horjeestay Culimada Ahlusunna ee ku sugan Muqdisho oo uu ugu horeeyo Sheekh Soomow,kuwaas oo sheegay inay dhigayaan banaanbax ay uga soo horjeedaan.